Ntụrụndụ ina achọta MENA yinye hotels 'uru ibu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Ntụrụndụ ina achọta MENA yinye hotels 'uru ibu
Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ọganihu siri ike na olu na ọnụahịa na mpaghara ntụrụndụ ahụ nyeere ụlọ oriri na ọ inụ inụ dị na Dubai aka inweta otu n'ime mmụba dị ịrịba ama na arụmọrụ kachasị elu na arụmọrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya, dị ka data kachasị ọhụrụ si HotStats.
Ebe ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ dị na Dubai dekọtara ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ 5.4 na pasent, na 87.8 pasent, uto na RevPAR (Revenue per Available Room) mekwara ka mmụba 11.4 rịa elu iji nweta ọnụego ụlọ a rụzuru na afọ na-afọ nke onu ogugu edere na onye obula (+ 15.6 percent) na otu (+ 2.4 percent) nkewa.
Ike nke ọchịchọ site na oge ezumike pụtara na mmadụ na otu ntụrụndụ na-agụ 60 pasent nke ngụkọta mkpa na Eprel, ma e jiri ya tụnyere pasent 48.8 nke ngụkọta na ọnwa 12 ruo Eprel 2017.
Na mgbakwunye na mmụba 13.0 pasent na TrevPAR (Total Revenue per Room Available), ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ dị na Dubai nwere ike belata ọnụego, gosipụtara site na nkwụsị nke 1.9 na nkwụghachi ụgwọ na 20.0 pasent nke ego ha nwetara, iji mee ka mmụba 20.7 pasent. na uru kwa ụlọ n'April.
Ndị ụlọ oriri na ọ hotụ hotụ Dubai ga-enwe olile anya na uto nke ọnwa a na-anọchite mmalite nke mgbake mgbe oge ọrụ na-adịbeghị anya na-esochi mkpọtụ ọnụahịa mmanụ.
Kuwait Hoteliers Slash Cost na-akwụ ụgwọ ọrụ uru
Hotlọ oriri na ọ 11.0ụ inụ na Kuwait dere ndekọ nke 6.9 mmụba na uru kwa ụlọ n'ọnwa a, nke dị na azụ nke XNUMX pasent TrevPAR dị ka ndị nwe ụlọ nkwari akụ na-akwụ ụgwọ.
Ebe ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ dị na Kuwait dekọtara mmụba nke 11.8 kwa afọ na RevPAR, n'ihi mmụba pasent 5.3 na-abawanye n'ime ebe obibi yana mmụba pasent 2.7 iji nweta ọnụego ọnụego ụlọ, nke a abụghị nke a sụgharịrị na Total Revenue, n'ihi ka ịdaba Na-abụghị omslọ Ego.
Agbanyeghị, na mgbakwunye na uto na TrevPAR, ego echekwara na Payroll (+1.7 percent) na Overheads (+3.5 percent) na ụlọ ime ụlọ ọ bụla, nyere aka na mmụba $ 15.27 na uru kwa ụlọ n'April.
N'agbanyeghị arụmọrụ siri ike, uto nke ọnwa a ezughi iji mebie ọnụ ọgụgụ 6.2 na-ebelata uru kwa ụlọ tara ahụhụ na Q1 2017. N'ihi ya, GOPPAR kwa afọ dara site na 1.2 pasent na $ 120.96.
Bahrain Grand Prix na-ebugharị Ọnwa Bumper maka Manama Hotels
Lọ oriri na ọamaụamaụ na Manama depụtara mmụba nke 32.0 pasent kwa ụlọ n'ọnwa a, nke a na-ebugharị site na ọkwa imebi ụlọ ebe ọ bụ na F1 Bahrain Grand Prix dị nso.
Dika isi mmekorita kacha nso kachasi nso nke nwere ebe obibi ulo ezumike, Bahrain Grand Prix na-acho mgbe nile ochicho nke otele na Manama. Ọzọkwa, oge ihe omume na 2017 pụtara na nkwadebe na oge agbụrụ niile dara n'ime ọnwa Eprel, karịa ịgbasa na mbubreyo-March na mmalite Eprel, dịka na 2016.
N'ihi nke a, ụlọ oriri na nkwari akụ na Manama dekọtara ọnụ ọgụgụ 10.4 pasent na-abawanye n'ime ebe obibi, ruo 69.0 pasent, ọkwa kachasị elu ụlọ kwa ọnwa edere na isi obodo Bahrain ruo ọtụtụ afọ.
Ọ bụ ezie na mmụba nke afọ na-abawanye na ọnụego ụlọ a rụzuru ka atụbara karịa, na 2.0 pasent, na $ 194.14, ọkwa ọkwa a karịrị naanị otu ugboro n'ime ọnwa 18 gara aga, nke dị na Disemba 2016, na-egosi uru nke uru ahụ Nnukwu ụlọ nkwari akụ na Manama.
N'ihi mmegharị na obibi na ọnụego, RevPAR na ụlọ nkwari akụ na Manama jiri 20.1 rịa elu. Site na mmụba edere na ụtụ na-abụghị -lọ, gụnyere nri na ihe ọverageụverageụ (+ 11.7 pasent), ụlọ oriri na nkwari akụ na Manama dekọtara mmụba 17.1 na TrevPAR, na $ 204.72. N'agbanyeghị ntakịrị mmụba na akwụ ụgwọ, olu siri ike kpalitere $ 19.71 elu na uru n'otu ụlọ, ruo $ 81.27.